Ahoana no fomba hamoronana profil-rindrambaiko mahasoa amin'ny fampiasana mpamorona backlinks dofollow?
Ny tompon'ireo tranonkala rehetra dia manonofy mba hampahafantarana ny orinasan-tserasera amin'ny mpanjifa mety. Izany no mahatonga azy ireo hanao fampielezan-tserasera amin'ny fividianana rindrambaiko izay ahitana ny fanatsarana ny fikarohana, ny marketing ara-tsosialy, ny famolavolan-dahatsoratry ny dofollow, ary ny sisa. Raha manana zavatra hizarana amin'ny mpihaino marobe ianao dia tena mila manao izany.
Ny fananganana rohy dia iray amin'ireo faritra tena manahirana amin'ny fanatsarana ny fikarohana. Ny rohy mankany anatiny dia tena ilaina mba hametrahana avo lenta amin'ny valin'ny fikarohana ary hahasarika mpanjifa mety - free super search. Ataony izay hahitanao ny votoatin'ny mpihaino anao ary hampiakatra ny orinasa hiverina amin'ny fampiasam-bola.
Ny fanorenana rohy tsy tafiditra dia tsy siantifika rocket fa ny fahazoana backlinks avy amin'ny tranokalan'ny avo PR dia mety ho sarotra ho an'ny mpamboly vaovao. Soa ihany fa maro ny mpanamboatra rindrambaiko dofollow no misy ao anaty tranonkala sy ireo mpanentana fanavaozana fikarohana momba ny fikarohana ary ireo mpamboly rohy, izay hanampy anao hahazoana ny siramamy mifandraika amin'ny avo amin'ny tranokalan'ny PR.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hizara aminao torohevitra vitsivitsy momba ny fomba hamoronana rakitra ho an'ny malalaka ianao.Ankoatra izany, dia hahita tranonkala backofs misy dofollow izay afaka manao dingana amin'ny famoronana rohy ekena kokoa kokoa.
Loharanon-tranonkala lohamilina dofollow
Hahita lisitr'ireo loharanon-tranonkala ahafahanao mahazo backlinks dofollow maimaim-poana ao anatin'ny fotoana fohy. Hiresaka momba loharanom-baovao lehibe toy ny Microsoft, Facebook, Google, sy ny sisa aho.
Talohan'ny hanombohantsika hiresaka momba ireo loharanom-baovao ireo dia tiako ny hilaza fa misy karazana backlinks roa - dofollow sy nofollow. Ny sasany amin'ireo tranonkala PR dia manome ireto karazana rohy ireto - Google+, YouTube, ary ny hafa. Mifanohitra amin'izany, ny sehatra ara-tsosialy malaza tahaka ny LinkedIn sy Facebook dia afaka manangana ny backlinks nofolo fotsiny.
Raha fohy, dolollow backlinks dia ireo izay mizara saka fifandraisana avy amina loharano iray mankany amin'ny iray hafa ary manampy amin'ny fananganana sehatry ny sehatra amin'ny tenimiafina manokana. Dlollow backlinks dia afaka manangana ny mombamomba ny marika ary mampiseho an'i Google ny loharanom-baovao azo itokisana. Ny backlinks Nofollow dia ny rohy izay tsy mamela jiosy mifandray ary tsy misy fiantraikany amin'ny laharan'ny pejy. Na dia izany aza dia mbola afaka mametraka ny mombamomba ny backlink ry zareo raha avy amin'ny loharanom-baovaon'ny PR.
loharano izay manana lanja be ho an'ireo mpampiasa manerantany. Izany no mahatonga azy ho PageRank avo indrindra. Ny fahazoana rohy tafiditra amin'ity tranokala ity, dia hampitombo ny fahefana amam-pahefanao ianao ary hanohanana ny lazan'ny tranonkala eo imason'i Google.
Mba hamoronana backlinks dofollow avy amin'i Microsoft, mila manaraka ireto dingana manaraka ireto ianao:
Mamorona ny kaonty vaovao amin'ny Microsoft.
Midira ary mandehana any amin'ny fizarana.
Sokafy ny rohy misokatra ary ampio ny rohy mankany amin'ny lahatsoratra fanoratana fikandrana.
Mba hamenoana ity dingana ity, tsindrio ny bokotra "Save".
Google Plus dia tambajotra sosialy natolotr'i Google. Azonao atao ny mahazo loharano azo antoka avy amin'io loharano io amin'ny alàlan'ny fanarahana ireo dingana ireo:
Midira amin'ny Google Plus amin'ny alalan'ny kaonty Gmail anao.
Mamorona pejy vaovao ho an'ny blôginao.
Valio ny pejy avy eo.
Ary farany, ampio ny rohy amin'ny fizarana URL.
Tsindrio ny bokotra "Save".